गिरोह त मन्त्रीज्यूका कर्मचारी नै रहेछन नी ! गोप्य मापदण्ड ३७ मालिकसँग कसरी पुग्यो ? | सु-सुचित नेपालको चित्र
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सर्वाधिक सफल मन्त्री हुन्–गोकर्ण बिष्ट । उनले समालेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयले एकबर्षमा राम्रो नतिजा पनि निकालेको छ । बैदेशिक रोजगारीका नाममा ठग्नेहरु किनारा लागेका छन् भने मलेसिया र कतारसँग श्रम सम्झौता गरेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयको बागडोर समालेदेखि मन्त्री बिष्टले बैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्नेलाई ‘गिरोह’ भन्ने गरेका छन् । तर पछिल्लो समय उनकै मन्त्रालयका कर्मचारी गिरोह बनेका छन् । मलेसिया कामदार पठाउनका लागि नेपालमा ३७ वटा मेडिकलले स्वास्थ्य जाँचको अनुमति पाएका थिए ।
ती भन्दा बाहिरका कुनै पनि संस्था वा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले गरेको परीक्षण मान्य हुँदैन्थ्यो । मन्त्री बिष्टले मेडिकलका नाममा भएको सिन्डिकेट हटाउन श्रम सम्झौता भएको ६ महिनासम्म कार्यान्वय गरेनन् । श्रम सम्झौता भएको ६ महिनासम्म मलेसिया रोजगार खोल्न उनी तयार भएनन् ।
मेडिकलका नाममा भएको सिन्डिकेट हटाउनु पर्ने उनको पहिलो सर्त थियो । मन्त्री बिष्टको सर्त मान्न तयार नभएको मलेसिया पछिल्लो समय लचिलो बन्यो र थप स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्न सहमत पनि भयो ।
मलेसिया सरकार र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालय प्रतिनिधिले स्वास्थ्य संस्था छनोटको मापदण्ड बनाए । तर त्यो मापदण्ड मन्त्रालयका कर्मचारीबाट ३७ वटै मेडिकलका मालिकसँग पुगेको थियो । मन्त्रालयले मेडिकल संस्थाहरुलाई फारम भर्न सार्वजनिक सुचना जारी गर्नुभन्दा एक महिनाअघि नै ३७ मेडिकल संस्थाका मालिकसँग मापदण्ड पुगिसकेको स्रोतले बताएको छ ।
१५ दिनभित्र मापदण्ड पुरयाउन नयाँ मेडिकललाई अप्ठेरो पर्ने भएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीले एक महिनाअघि नै ३७ मेडिकलका मालिकलाई गोप्यरुपमा मापदण्ड पठाएका थिए । ३७ मेडिकलका मालिकले एउटा ठाउँबाट एकै पटक उपकरणहरु मगाएका छन् ।
मन्त्री बिष्टको मन्त्रालयमै कर्मचारी गिरोह बनेपछि बैदेशिक क्षेत्रमा चर्चा चल्न थालेको छ । ‘हामीलाई गिरोह भन्ने मन्त्रीकै मन्त्रालयमा गिरोह रहेछन नी’ भन्दै उनीहरुले चर्चा गर्न थालेका छन् यस काठमाण्डौमा समाचार छ ।